Abenzi kunye nabanikezeli be-Plain - China Plain Box Lure Box Factory
Iibhokisi eziMnyama zangaphandle zeBhokisi yokuLoba
Ibhokisi yokuloba emfusa ethandekayo ngokutywinwa okusebenzayo, ukothuka kunye nokwehla kokuxhathisa, ukudideka okunokufunyanwa Ingasetyenziselwa ukugcina izixhobo zokuloba, ezinjengelithi yokuloba, umgca wokuloba, njl njl, kunye nezinye izixhobo kunye nezixhobo, ezinemisebenzi eyahlukeneyo.
Inombolo Inombolo: BX011
Ingcaciso: 198 * 145 * 40mm
Umthamo: Amacandelo ali-18
Umbala: ngaphaya / mfusa
Ukusetyenziswa: Ukuloba kwangaphandle
Ukuloba ibhokisi enezahluli eziLungelelanisiweyo
Ukuloba ibhokisi eyahlukeneyo yokuncedisa, umncedisi wakho olungileyo wokuloba ngaphandle. Ngokufutshane gcina izixhobo zakho zokuloba, amagwegwe, izithiyelo, njl.njl. Uyilo lulula kwaye kulula ukuluqhuba.
Ukuloba Ibhokisi yePlastiki engabonakaliyo
Ibhokisi yokuloba yangaphandle, ibhokisi yokugcina, ibhokisi yokuloba, le yibhokisi yokuloba esekuhleni enokwahlula okulungelelanisiweyo okunemisebenzi emininzi.
Ukuloba okuMnyama kunye nokuMhlophe okuThengiswayo ngeBhokisi enabaHluli abaLungeleleneyo
Ibhokisi yokuloba emnyama nomhlophe. Isigqubuthelo esimnyama esiphezulu, umzimba ophambili umhlophe ngokucacileyo, ungabona ukuhanjiswa kwangaphakathi kwaye kulula ukufumana izinto. Uyilo lwegumbi lunokuhlalisa izinto ezinobungakanani obahlukeneyo. Uyilo olulula, akukho tshintshi inzima, kulula ukuyisebenzisa. Isitshixo siqinile kwaye asonakaliseki lula.
Ukuloba kwePlastiki yeplastiki yokuLula Ibhokisi eMnyama
Uthotho abathathu abamnyama beebhokisi zokuloba. Ebala ngaphaya + emnyama, emnyama + ebonakalayo, kunye nako konke okumnyama. Ungakhetha ngokukhululekileyo ngokweemfuno zakho. Ingaphakathi lahlulwe kuyilo lwegridi, isahlulelo sinokudityaniswa kwaye sihanjiswe, kwaye ingaphakathi inokudityaniswa kubungakanani obuyidingayo, isimahla kwaye ibhetyebhetye, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Ibhokisi yokuLoba ngaphandle yeLake Blue
Ibhokisi entsha yokuloba eluhlaza okwesibhakabhaka iyafumaneka ngombala ohlaza okwesibhakabhaka ocacileyo kunye nokuguqukayo kukhetho lwakho, kwaye uyilo olusebenzisekayo kulula ukuluhambisa. Ubungakanani obukhulu, umthamo omkhulu, ukusetyenziswa kwendawo ephezulu. Izinto zeplastiki ezinobungani bendalo, umzimba webhokisi oguqukayo, izinto zokugcina zangaphakathi zicacile ngokujonga nje.
Ibhokisi yePlastikhi yokuCoca
Ibhokisi yokuloba yeplastikhi ebonakalayo, eyenziwe ngezinto ezinokusingqongileyo ngaphandle kwe-BPA, inamagumbi ali-18, anokuhlengahlengiswa ngokukhululekileyo ukulungiselela izixhobo zakho zobukhulu obahlukeneyo. Imiphetho ejikelezileyo ayilimazi izandla zakho. Kulula ukuyiphatha kwaye inamandla okuhlala. Ngumncedisi wakho ogqibeleleyo wokuloba ngaphandle.
Ukuloba ukuLwela isiXhobo seBhokisi yezixhobo
Ibhokisi yokugcina ebonakalayo ebonakalayo inokuphakama phantse kweesentimitha ezilishumi, kwaye indawo yokugcina inamandla ngakumbi. Uyilo oluselubala likuvumela ukuba ubone ngokucacileyo imixholo ngaphakathi kwaye kulula ukuyifumana. Yenziwe ngeplastiki engenanto ye-BPA, enobuhlobo kwindalo kwaye ihlala ixesha elide.
Iibhokisi eziLuhlaza zangaphandle zeBhokisi yokuLoba
Uthotho olutyheli lweebhokisi zeempahla zokuloba ezenziwe ngezinto ezomeleleyo, zomelele kwaye zomelele. Uyilo lweeseli ezininzi lwenza kube lula ukugcina. Umbala oguqukayo uququzelela ukuchongwa kwezixhobo zangaphakathi. Iigridi ezikumgangatho ophezulu, uluhlu olubanzi lwesicelo. Yinto ekufuneka uyenzile ekulobeni kwakho ngaphandle.
Umbala: ngaphaya / tyheli
Ibhokisi yokuLoba eluhlaza engafakwanga kwiBhokisi yokuFikelela
Uthotho oluhlaza lweebhokisi zokuloba, ukudityaniswa kwemibala eluhlaza kunye nebala, zisondele kakhulu kwindalo. Uyilo olusengqiqweni, kulula ukuluqhuba, kulula ukulusebenzisa, ubugcisa obugqwesileyo, ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokuzinza ziimpawu kunye neenzuzo. Iya kongeza ubumnandi kuhambo lwakho lokuloba.